Warshada Skid Fuuqbaxa |Soosaarayaasha Fuuqbaxa Shiinaha ee Skid, alaab-qeybiyeyaal
Gaar ahaan 50 × 104TPD warshad daaweynta fuuqbaxa dabiiciga ah
Ka dib nuugista biyaha, TEG waxaa dib u soo cusboonaatay habka cadaadiska atmospheric ee tuubada dabka kuleylinta iyo dib u soo kabashada.Kulaylka ka dib, dareeraha kulaylku dhammeeyey waa la qaboojiyey oo lagu celiyaa munaaradda nuugista TEG ka dib cadaadis dib-u-warshadeynta.
3 Qalabka Fuuqbaxa ee Gaaska ee Ku Leh MMSCD ee Gaaska Dabiiciga ah
Waxaan ku takhasusnay saliida iyo gaaska daweynta ceelka dhulka, nadiifinta gaaska dabiiciga, daaweynta saliida ceyriinka, soo kabashada hydrocarbon fudud, warshad LNG iyo matoor gaaska dabiiciga ah.
Ka Saarida Biyaha ee Dabiiciga ah ee loo sameeyay ee loo yaqaan TEG Unugga Fuuqbaxa
Fuuqbaxa TEG waxaa loola jeedaa in gaaska dabiiciga ah ee fuuqbaxay uu ka soo baxo xagga sare ee munaaradda nuugista oo uu ka baxo cutubka ka dib beddelka kulaylka iyo xakamaynta cadaadiska iyada oo loo marayo dareeraha caatada ah ee gaaska qallalan.
fuuqbaxa Glycol ee gaaska dabiiciga ah
Habka fuuq-baxa ee Rongteng glycol waxay ka saartaa uumiga biyaha gaaska dabiiciga ah, qalabka daaweynta gaaska dabiiciga ah, kaas oo ka caawiya ka hortagga samaynta fuuq-baxa iyo daxalka waxayna kordhisaa waxtarka dhuumaha.
shaandho molecular ee fuuqbaxa
Fuuqbaxa shaandhada molecular waa aalad muhiim u ah nadiifinta gaaska dabiiciga ah ama qaboojinta gaaska dabiiciga ah.Shaandho molecular waa crystal aluminosilicate crystal ah qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka iyo qaab-dhismeedka microporous lebbisan.